» Journey-Assist - Ihe niile ịchọrọ ịga njem
Njem - Nye aka
Oge niile dị mma maka ezigbo njem
/Wa / Mpaghara
Ikuku na Hotels
Ntuziaka bara uru
Nabata na njem njem anyị Journey-assist!
Ọrụ anyị bụ inyere gị aka ịhazi onwe gị njem! Ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ njem mmụta, njegharị njem ha, ịzụ ahịa, foto njegharị ma ọ bụ naanị njem maka nzube nke izu ike. N'ebe a, ị ga - achọta ozi niile ịchọrọ ime nke a. Site na map mmekọrịta na ebe nkiri na-ejedebe na ndụmọdụ na nyocha nke ndị njem nleta nwere ahụmahụ, ya na akụkọ foto na vidiyo.
Ọzọkwa na Portal ị nwere ike ịchọta nnukwu ozi bara uru gbasara ọtụtụ mba, ebe nkiri na ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na ha.
Maka mmekọrịta nke ọma, ọnụ ụzọ ahụ na-enye ohere ebipụta gị isiokwu, ịkọrọ gị Atụmatụ na ndụ hacks, ahapụ gị nzaghachi na njem akụkọ.
Ozi maka ịhazi njem onwe onye
Ebe njem kachasị ewu ewu
na ndị ọzọ ...
Isiokwu bipụtara ebe a aha ndị ọbịa na Portal anyị. N'ezie, isiokwu gị ma ọ bụ nyocha gị nwekwara ike ịpụta ebe a. Isiokwu ndị gụnyere ndụmọdụ bara uru, ndụmọdụ, nkọwa nke ebe ndị na-adọrọ mmasị, nyocha na ihe dịka nke ahụ. N'ezie, tupu ebipụta ya, a na - ahazi isiokwu niile maka mkpa ọdịnaya ahụ dị 🙂
Iji mepụta mbipụta gị, gaa na akaụntụ nkeonwe gị, ma ọ bụ pịa HERE 🙂
Gagharị na Asia
Vietnam Laos Ọchịchị
Cambodia Сингапур Japan
Akwụkwọ niile gbasara mba Eshia
7 mpaghara mara mma nke Turkey
Isiokwu Ndị Dị na 7 Nke Kachasị Mma nke Turkey nke 97 pasent nke nnukwu ala Turkey dị na Asia, yana pasent atọ nke ókèala ya dị na Balkan Peninsula na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Europe, ndị Bosphorus, Oké Osimiri Marmara na Dardanelles kewapụrụ site na ndị ọzọ nke mba ahụ. Turkey gbara oke osimiri site na Aegean, Black and Mediterranean Seas ma nwee oke osimiri mara mma ogologo. Ọtụtụ ...
Gụọ kpam kpam
10 osimiri kacha mma na Turkey
Oke osimiri 10 dị na Turkey Isiokwu Ndị dị na Turkey bụ ọrụ mgbe ochie nke ọdịbendị, ndị mmadụ na mbara ala. Ebe ọwụwa anyanwụ Europe na Asia n'akụkụ nke ọzọ, Turkey emeela ogologo akụkọ ihe mere eme ya n'okpuru mmetụta nke alaeze ukwu, njikọta ọdịnala na ụzọ azụmahịa ndị na-agafe na ya. Okirikiri ala ya na oke osimiri ya ...
Ihe nlegharị anya 10 kacha mma na Istanbul toro toro
Ihe nlegharị anya 10 kacha mma na Istanbul Isiokwu ndị dị na Turkey Istanbul bụ obodo dị mma na ichekwa ọdịbendị ya na akụkọ ntolite ya, na-agwakọta ha n'ime obodo na-atọ ụtọ nke nwere ọtụtụ ihe na-enye ndị njem si n'akụkụ ụwa niile. Tọrọ ntọala na oge Neolithic, Istanbul taa bụ obodo nke oge a nke na-anọgide na-eme ihe nketa akụkọ ihe mere eme site na alakụba ya, basilicas na ...
Agwaetiti iri kacha na Indonesia
Agwaetiti iri kacha buo nke Indonesia Isiokwu nke Indonesia bu otu agwaetiti kacha ibu n’uwa, nwere agwaetiti toro 10 n’oké osimiri. A na-ahụta agwaetiti ise dị ka isi n'ihi oke ha, ebe ndị ọzọ kewara n'etiti obere agwaetiti Indonesia iri atọ. Ana m egosi gị ntị agwaetiti 17 kachasị na Indonesia. iri…
10 osimiri kacha mma na agwaetiti Lombok na Indonesia
Oke osimiri 10 Lombok dị na Indonesia Isiokwu Ndị Njem Ndị Ọbịa na-abịa Lombok maka ọtụtụ ihe. Ha nwere ike chọọ inyocha okike ma ọ bụ mụtakwuo banyere obodo a bụ agwaetiti ndị Alakụba na-ebikarị. Ndị ọzọ na-achọ ịhụ ụfọdụ oke osimiri kacha mma Lombok, anwụ anwụ, na ikekwe nsị, mmiri na sọọfụ. Enwere ...
10 agwaetiti kacha mma na Indonesia
Isiokwu Ndị Dị n'ime 10 nke Indonesia Dị Mma Indonesia dị n'etiti India na Pacific Ocean ma dị elu karịa akara kere ụwa. Mba a pụrụ iche nwere ihe karịrị agwaetiti 17. Agwaetiti ndị a kacha mara amara dịka Java, Sumatra na Borneo bụ ụfọdụ n’ime ndị kachasị ibu n’ụwa, mana ndị pere mpe kwesiri ka ha gaa. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ...
Great Britain Ukraine Czech Republic
Ireland Croatia Greece
Akwụkwọ niile gbasara mba Europe
7 Ebube nke Gris oge ochie
7 Ihe ịtụnanya nke Isiokwu Ndị Dị na Gris oge ochie N'ime ụlọ niile ochie dị ịtụnanya na Gris, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole lanarịrị ruo taa, ebe ndị ọzọ apụọla kpamkpam n'ihi mbibi n'ihi ọdachi ndị na-emere onwe ha ma ọ bụ ndị mmadụ n'onwe ha. Ọbụna n'ụlọ ndị ka dị ndụ, akụkụ ụfọdụ na-ebibi ma ọ bụ kpamkpam.
Ihe nkiri 10 kachasị ewu ewu na Poland
Poland nke iri ndị ama ama ama ama ama ama ama karịa Poland nke anwụghị kemgbe ọtụtụ narị esemokwu esemokwu toro na mba toro onwe ya dị mpako ịdị njikere ịrụ ọrụ ọhụrụ na akụkọ ntolite nke oge a. Ndị ọbịa na Poland na-achọpụta ihe ndị obodo ahụ mara ogologo oge: Poland bụ obodo nwere ọdịbendị bara ọgaranya, ọmarịcha ọdịdị ala na saịtị akụkọ ihe mere eme na-adịghị ahụkebe. Ma ị na-eme nnyocha ...
Ebe ezumike a na-emechikarị na Gris
Ebe a na-ahụkarị ihe ịga nke ọma na Greece Isiokwu Ndị dị na Gris bụ ihe a ma ama dị ka nwata nke mmepeanya na ọchịchị onye kwuo uche ya, na-ekwughị egwuregwu Olympic ama ama. Ọ bụ ebe njem nleta mara mma nke nwere ọtụtụ ebe ama ama dịka Santorini na Athens. Mgbe ebe ezumike ndị a jupụtara na ihe ịtụnanya ịhụ na ...
Kirillovka. Ezumike n’Oké Osimiri Azov. Ukarain
Kirillovka. Ezumike n’Oké Osimiri Azov. Isiokwu ndị dị na Ukraine N'ime usoro nke ụwa njem, ọ bụ oge iji nlezianya leba anya na mba ndị anyị bi na ya, kama ị na-atụ nrọ maka ebe anyị ga-esi nweta ugbu a agaghị ekwe omume.Ọ bụrụ na ndị bi na Ukraine, enwere Oké Osimiri Azov mara mma! leruo ya anya n'ime ...
Agwaetiti 10 kacha buru ibu na Gris
10 agwaetiti buru ibu na Greece Isiokwu nke ọdịnaya O siri ike ikwu kpọmkwem agwaetiti ole gbasasịrị na Gris. Ndị na-amụ banyere ọdịdị ala na-eme atụmatụ na a pụrụ inwe ihe dị ka otu puku agwaetiti na narị abụọ na puku isii. Agbanyeghị, imirikiti n'ime ha pere mpe ma biri n'ime mmadụ kemgbe ọtụtụ narị afọ gara aga. Gris nwere otutu agwaetiti di iche-iche, otutu n'ime ha dina na Aegean na ...
7 agwaetiti mara mma nke ugwu ọwụwa anyanwụ Aegean. Gris
7 agwaetiti mara mma nke ugwu ọwụwa anyanwụ Aegean. Greece Isiokwu ndị dị na ya Agwaetiti Aegean nke ugwu ọwụwa anyanwụ, gbasasịa n'ụsọ osimiri Aegean nke Asia Minor, bụ nnukwu agwaetiti na-enweghị isi. Agwaetiti ndị a, nke kacha dịpụrụ adịpụ na agwaetiti Greek, nwere ike ịnweta naanị n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku ma ọ bara uru. A na-ahụkarị agwaetiti ndị a ...
Na-eme njem n'Africa
Akwụkwọ niile gbasara mba Africa
Ebe 10 kacha elu na Morocco
Ebe 10 kacha elu na Morocco Ọdịnaya Humphrey Bogart na Ingrid Bergman nwere ike ị nyela ụwa Casablanca, obodo kachasị ukwuu na mba ahụ, mana Morocco nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ karịa obodo a dị ebube. Ochichi mbu nke France na-enye ndi njem ohere ka ha daba na ndu nke omenala Arab na Berber oge ochie, sunbathe na osimiri ...
Ihe nlegharị anya 10 kacha mma na akara ala Morocco - TripAdvisor
Isiokwu Ndị Dị na 10 nke Morocco E Nwere Isiokwu Ndị Dị n’ Moroccosọ Oké Osimiri Morocco na odida obodo mara mma, nke nwere osimiri dị ogologo, ọdụ ụgbọ mmiri e wusiri ike, ala ahịhịa juru na ugwu ndị dị elu Atlas, nwere ike ịmasị ndị njem. Gbakwunye na nke a nke Fez, Meknes na Marrakesh nke alaeze ukwu, na ezigbo atụ nke mbido ụlọ Alakụba mbụ, na gị ...
Osimiri 10 kacha mma na Morocco
Okpokoro Okpokoro Okpokoro 10 nke Moroccan nke Osimiri Morocco dị n'ụsọ oké osimiri na-agba ọsọ n'akụkụ Oké Osimiri Atlantic n'ebe ọdịda anyanwụ na Oké Osimiri Mediterenian n'ebe ugwu, nke pụtara na e nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke osimiri ị gara ma nwee obi ụtọ. Enwere ọtụtụ ebe dị egwu maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị nwere mmasị na ọdụ ụgbọ mmiri, mana ọ bụghị ...
Mostlọ arụsị 10 kacha mma n'oge ochie
Mostlọ arụsị 10 kacha mma n'oge ochie Egypt Ọdịnaya Akụkọ ihe mere eme nke Ijipt oge ochie malitere kemgbe ọtụtụ puku afọ. E wuru ụlọ arụsị ndị mbụ nke Ijipt gburugburu n’etiti narị afọ nke anọ BC, ọ bụkwa naanị ụlọ ndị amị dị mma. Ulo ikpeazu, nke ndi Ijipt ochie jiri maka ebum n'uche ya, jere ozi dika ulo uka rue oge 4th nke ...
10 ebe kacha mma ịga leta na Namibia
Top 10 Ebe Nleta na Namibia Isiokwu Ndị Dị na Southwest Africa bụ ebe obibi Namibia, bụbu ógbè German nke nweere onwe ya naanị na 1990. A maara Namibia maka ụlọ ọrụ diamond na omenala ndị na-asọ oyi, yana ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya nke ihe ndị na-adọrọ adọrọ. Ọ bụrụ na gị echiche nke a nrọ ezumike na-agụnye ọtụtụ nọ n'ọrụ ahụmahụ ...
Travelgagharị na South America
5 kasị mara mma n'ógbè Brazil
5 mpaghara mara mma kachasị mma na Brazil Isiokwu nke ọdịnaya Brazil bụ nnukwu South America. Ọ bụ mba kachasị ukwuu na kọntinent na mba nke ise kachasị ukwuu n'ụwa. Ọ bụ ebe obibi ụfọdụ n’ime obodo ndị kachasị maa ama n’ụwa niile; dị ka Rio de Janeiro, na onye ọ bụla nwere ike iche n'echiche obodo a ama ama. 5 kasị mara mma ...
Ihe nlegharị anya 10 kacha mma na ama ama - TripAdvisor
Bolivia's Top 10 Ebe Nleta Isiokwu Ndị Dị na Bolivia bụ otu n'ime mba ndị kachasị elu na ndị dịkarịsịrị anya n'ụwa, ọtụtụ n'ime ha ka na-emetụtabeghị oge. Bolivia bụ ebe obibi nke ụmụ amaala karịa mba ọ bụla ọzọ na America. Maka ndị njem, Bolivia na-enye ọtụtụ ọdịbendị ọdịbendị nke ọdịbendị dịgasị iche iche, ọmarịcha ọdịdị ala na oke ọhụụ. Echere m ...
10 ebe kacha mma ịga leta Ecuador
Ebe 10 kacha gaa na Ecuador Aha ya bụ Equator nke gafere mba ahụ, Ecuador bụ mba na-enye mmadụ niile ihe. Ọ na-amalite site na otu puku kilomita na ọkara nke ụsọ oké osimiri nwere oke osimiri mara mma, ma site n'ebe ahụ ruo Andes na oke ọhịa nke oke mmiri nke osimiri kachasị asọpụrụ n'ụwa - ...
Ga njem na Central na North America
Ebe nkiri njem nlegharị anya 10 kacha elu na Belize
Top 10 Belize Tourist Attraction Isiokwu Ndị dị n’ime Cheedị obodo nwere ụsọ mmiri dị n’obodo okpomọkụ, akuku coral, ndagwurugwu, anụ ọhịa mara mma na ebe obibi Caribbean. Na ụsọ oké osimiri nke mba a bụ nke abụọ kachasị nwee mgbochi na ụwa, ma mkpọmkpọ ebe nke ụlọ arụsị oge ochie gbasasịrị n'ọhịa ya. Ọ bụrụ na ị chere na mba dị otú ahụ ...
10 ebe kachasị mma na Costa Rica
N’ịbụ nke dị n’etiti Nicaragua na Panama, Costa Rica na-etu oke osisi na ahịhịa nke mba kachasị elu na ụwa na mgbakwunye na mpaghara ugwu, ndagwurugwu, oke ọhịa, ugwu mgbawa, osimiri, ọdọ mmiri na osimiri. Gagharị na ya na-ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị.Ha bụ akara m maka 10 kachasị adọrọ mmasị ...
Australiagagharị Australia na Oceania
12 ọdọ mmiri mara mma kachasị mma na New Zealand
12 nke ọdọ mmiri mara mma nke New Zealand Isiokwu nke ọdịnaya dị na Pacific Ocean n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ nke Australia, New Zealand nwere agwaetiti abụọ ma ama ama maka ugwu ugwu ya na ọdịdị ala mara mma. Ọtụtụ ala dị n'agwaetiti ndị ahụ bụ mpaghara ogige mba, ọkachasị na South Island, ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịda anyanwụ dum n'akụkụ ...
30.10.2020 / Remalaya / Australia na Oceania, New Zealand / Nkwupụta na ọdọ mmiri 12 mara mma kacha mma na New Zealand ọ dịghị
7 ụbọchị kachasị mma site na Queenstown New Zealand
7 ụbọchị kachasị mma site na Queenstown Isiokwu Ndị Dị na New Zealand Queenstown bụ obere obodo ezumike dị na New Zealand nke dị n'akụkụ Ọdọ Mmiri Wakatipu ma na-etu ọnụ banyere oke ugwu snow kpuchiri. N'oge na-adịghị anya gara aga, amara ya dịka ebe ezumike, mana ugbu a ọnọdụ agbanweela nke ukwuu ...
29.10.2020 / Remalaya / Australia na Oceania, New Zealand / Nkwupụta n'elu njem ụbọchị 7 site na Queenstown. New Zealand ọ dịghị
16 kasị mara mma mpaghara nke New Zealand
16 mpaghara mara mma nke New Zealand Isiokwu nke ọdịnaya Otu n'ime obodo ndị kachasị mma n'ụwa, New Zealand na Oceania jupụtara na ebe nkiri mara mma. Ọtụtụ ugwu mgbawa na ugwu dị elu na-agbago n'elu oke osimiri dị ogologo ma maa mma na ndagwurugwu na-eme nri, ọdọ mmiri na osimiri ndị na-egbuke egbuke na-asọba n'ala a gọziri agọzi.
29.10.2020 / Remalaya / Australia na Oceania, New Zealand / Nkwupụta na mpaghara 16 mara mma nke New Zealand ọ dịghị
Ihe 10 na-atọ ọchị ime na Napier. New Zealand
Ihe 10 na-atọ ọchị ime na Napier. Isiokwu Ndị Dị na New Zealand Obodo nta Napier dị na North Island, nke dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke New Zealand nke na-ele Pacific Ocean anya, bụ ebe mara ezigbo mma ma na-atọ ụtọ maka oge ntụrụndụ. Napier, nke a makwaara dị ka "Art Deco Capital of the World", juputara na ụlọ ndị mara mma nke gosipụtara ụdị ụkpụrụ ụlọ pụrụ iche; Ọzọ ...
27.10.2020 / Remalaya / Australia na Oceania, New Zealand / Nkwupụta Ndekọ ihe omume iri atọ na-atọ ụtọ na Napier. New Zealand ọ dịghị
Ihe 9 kachasị mma ime na Nelson. New Zealand
Ihe 9 kachasị mma ime na Nelson. Isiokwu Ndị Dị na New Zealand Ndị zoro na mbara ala nke Oké Osimiri Gulf nke Tasman, obodo Nelson dị n'akụkụ mara mma nke New Zealand, nke ogige ntụrụndụ atọ dị ebube gbara ya gburugburu. Obodo kachasị ochie na obodo a, tọrọ ntọala obodo a na 1841 site n'aka Lord Admiral Nelson, onye akpọrọ aha ya. Obodo, ji ịhụnanya kpọọ ...
27.10.2020 / Remalaya / Australia na Oceania, New Zealand / Nkwupụta na 9 kasị mma ihe na-eme na Nelson. New Zealand ọ dịghị
Bestbọchị 9 kachasị mma site na Auckland. New Zealand
Bestbọchị 9 kachasị mma site na Auckland Ihe ndị dị na New Zealand Auckland, obodo kachasị na New Zealand, nwere ọtụtụ ihe. Ọ bụ ebe obibi ndị Polynesia kacha ibu n’ụwa. Ọ na-ewu na ifịk basalt mgbawa ugwu - naanị ndị dị otú ahụ obodo na ụwa. Ọ nwere ọmarịcha ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, marina kachasị ukwuu na ndịda mgbago na ...
27.10.2020 / Remalaya / Australia na Oceania, New Zealand / Nkwupụta Gaa na 9 ụbọchị kachasị mma site na Auckland. New Zealand ọ dịghị
Gagharị na China
Ogige ntụrụndụ mba mara mma nke 12 na China
Ogige ntụrụndụ mba ndị mara mma nke China nke iri na abụọ Isiokwu ndị dị na ya bụ ogige mba ọ bụghị ihe mbụ na-abata m n’uche mgbe ị na-eche banyere China. Agbanyeghị, mba a nwere ihe karịrị ogige ntụrụndụ mba 12 pụrụ iche. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, gọọmentị China emeela ezigbo mgbalị iji gbasaa usoro ogige mba. Tumadi iji chefuo mmetọ, ...
10 kachasị ịtụnanya dị n’ebe ọwụwa anyanwụ China
10 Ọtụtụ Ebe Dị zingtụnanya na Eastern China Isiokwu Ndị Dị na Ya Ọwụwa Anyanwụ China bụ ụwa nke ya. Ọ nwere akụkọ ihe mere eme bara ụba, ụfọdụ obodo dị ihe karịrị afọ 6000. Ruo ọtụtụ narị afọ, ọwụwa anyanwụ China emewo ka ikuku dị jụụ ma mee ka mkpụrụ obi dajụọ. Eastern China na-enwe obi ụtọ uche gị niile: site na obodo mmiri mara mma, gafere ọwa mmiri jupụtara na nwayọ nwayọ ...
10 ọtụtụ ebe ịtụnanya dị na mgbago ugwu China
Uzo kacha di egwu iri kacha di na North China Isiokwu nke Ndi a Republic of China bu obodo di iche-iche di iche-iche. N'ihi oke ya, ọ gaghị ekwe omume ịhụ ya niile n'otu njem, mana enwere nlegharị anya na mba niile. North China bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị njem oge mbụ North China bụ ebe ị ga - achọta ...
10 kachasị ịtụnanya na ndịda China
10 Ọtụtụ Ebe Ndị Dị intụnanya na Mpaghara Ndị Dị na South China Ọdịnaya China na United States nwere ihe dịka otu ala, mana China nwere ihe ruru otu ijeri ndị mmadụ. Gagharị n'ime obodo a buru ibu nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Mana ọ ga-adaba adaba ma ọ bụrụ na ị kewaa nkewa mba a n'ime obere akụkụ dịka ...
Obere ihe omuma banyere nnukwu mgbidi nke China
Obere ihe omuma banyere nnukwu mgbidi nke China nnukwu mgbidi nke China. Otu n’ime ihe ịtụnanya ọhụrụ nke ụwa Nnukwu mgbidi nke China, nke agụnyere na ndepụta nke ọhụụ asaa ọhụụ nke ụwa, bụ otu n’ime ihe ncheta ama ama n’ụwa niile, mana enwere ike ịnwe ihe ole na ole ịmaghị banyere ya. na…
Anyị na-agafe Russia, Ukraine, Belarus
Ihe ị ga-eme na Omsk. Russia
Ihe ị ga-eme na Omsk. Russia Isiokwu ndị dị na Russia Na Russia, na ndịda akụkụ ọdịda anyanwụ Siberia, na njikọta nke Irtysh Osimiri na aka nri ya, nke a na-akpọ Om, obodo Omsk dị ntụsara ahụ.N'ihi ibi na Western Siberia, nhọrọ ịzụta ụlọ na Omsk nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ. N'ihi na obodo ahụ bụ n'ezie kwesịrị ekwesị n'ihi na ezi ...
Izu ike na Crimea
Ezumike na ọdịnaya Crimea Na - ezukọ - Crimea! Kedu ihe mbụ na - abata m n'uche mgbe ị na - eche ebe ị ga - anọ ezumike gị? Nke mbu - Crimea! Kedu ihe bụ Crimea? Nke mbu, Crimea bụ akụkọ ihe mere eme na ọgaranya. Ndị Genoese, ndị Gris, ndị Tata, ndị Russia, ndị Yukren. Nke a pụtara na enwere akụkọ ihe mere eme - ebe ewusiri ike, ụlọ, ebe obibi ndị mọnk, ...
Obodo nta Dzhubga. Mpaghara Krasnodar. Russia
Obodo nta Dzhubga. Mpaghara Krasnodar. Nchịkọta nkọwa dị na Russia Achọrọ m ịgwa gị gbasara obodo Dzhubga a maara nke ọma, n'agbanyeghị na ọ pere mpe.Ọ dị nke ọma, n'ọnụ mmiri mmiri nke otu aha ahụ, nke na-asọba n'Oké Osimiri Ojii. O mere na ndị na-aga Oké Osimiri Ojii n'okporo ụzọ awara awara M-4 gafere obodo a, dịka site na nzacha. ...
Gagharị na Bali
Agwaetiti 7 dịpụrụ adịpụ nke Nusa Tengara. Indonesia
Agwaetiti 7 dịpụrụ adịpụ nke Nusa Tenggara. Isiokwu Ndị Dị n'Ime Indonesia Ọtụtụ narị agwaetiti ndị gbatịrị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Bali ka a na-akpọ Nusa Tenggara, mpaghara dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Indonesia nke na-aghọwanye njem njem na-ewu ewu. Islandsfọdụ agwaetiti na-etu ọnụ maka otu osimiri mara mma nke na-adọta ndị ọbịa na agbata obi Balinese ha ...
25.09.2020 / Remalaya / Eshia, Indonesia, Gagharị na Bali / Nkwupụta Ndekọ agwaetiti 7 dị egwu nke Nusa Tengara. Indonesia ọ dịghị
10 agwaetiti kachasị mma na nso Bali
10 Ọtụtụ agwaetiti ndị mara mma na nso Bali Isiokwu Ndị Dị na Bali, nke a makwaara dị ka Island nke Chi, bụ ebe njem kachasị ewu ewu na Indonesia. Na ijikọta akụkọ ntolite dị egwu na ọdịnala ime mmụọ, Bali nwere ihe maka onye ọ bụla na-eleta. Ma nke kachasị mkpa, agwaetiti ahụ mara mma n'ezie, ọ nwere ihe niile site na ...
25.09.2020 / Remalaya / Eshia, Indonesia, Gagharị na Bali / Nkwupụta na agwaetiti 10 mara mma nke dị nso na Bali ọ dịghị
Lọ nkwari akụ 10 kacha mma na Bali
Toplọ nkwari akụ iri kacha elu na Bali Isiokwu Ndị Dị na Bali n’enweghị mgbagha ọ bụ ebe kacha mma ịhọrọ ebe obibi na Indonesia.Ọtụtụ ụlọ ezumike ego dị n’agwaetiti ahụ ka a ga-ahụ na Kuta, nke bụ ebe ọtụtụ ndị njem nleta na-aga.Ma, ndepụta a gụnyere ebe ntụrụndụ kachasị mma na Bali dị ka ndị ọbịa gosipụtara. tinye uche na Nusa Dua, Seminyak na Ubud. Ubud na ebe ntụrụndụ Ubud kwesịrị ekwesị maka ...
24.09.2020 / Remalaya / Eshia, Indonesia, Gagharị na Bali / Nkwupụta na 10 kacha mma hotels na Bali ọ dịghị
Njem anyị na Bali
Njem anyị na Bali Day 1 Abịa na Denpasar n'ihe dịka elekere abụọ nke abalị. Hotellọ nkwari akụ Bali Hyatt anyị zitere anyị tagzi nke nwere ezigbo ọkwọ ụgbọala 🙂 anyị wee banye Sanur ruo ihe dị ka ọkara elekere .. na Bali Hyatt anyị. Anyị nwere mmasị na Sanur ozugbo ... na ụlọ ndị a mara mma na, n'ezie, ọmarịcha ihu igwe na Bali ...
11.09.2020 / angel / Eshia, Gagharị na Bali, Eziokwu nyocha / Ihe 3 kwuru na njem anyị na Bali
26.11.2020 / Remalaya / Greece, Ezigbo mmasị / Nkwupụta na 7 ebube nke Gris oge ochie ọ dịghị
Ihe oyiyi 8 kachasị ukwuu n'ụwa
Ihe ogidi abuo abuo na uwa Isiokwu nke ọdịnaya A rụbela nnukwu ihe akuku kemgbe oge ochie. Nnukwu Sphinx ahụ, nke ndị Ijipt oge ochie rụrụ nke Old Kingdom, dị elu 8 mita (20) ma ka bụ otu n'ime nnukwu ihe oyiyi na ụwa. N'ime afọ 66,34 gara aga, ụwa ejirila akaebe wuo nke kawanye elu ...
17.10.2020 / Remalaya / Ezigbo mmasị / Nkwupụta na 8 kasị ukwuu akpụrụ akpụ n'ụwa ọ dịghị
Choputa Ellora Caves nke ochie na India
Choputa ihe ochie Ellora Caves na India Isiokwu nke Ellora Caves bụ otu n'ime nnukwu ogige ndị mọnk n'ụwa, nke dị kilomita 30 (20 kilomita) n'ebe ugwu-ọdịda anyanwụ nke Aurangabad, nke dịdebere obodo Ellora na India. Ndị na-eso ụzọ Buddha, Hindu na Jainism wuru ihe owuwu a n'etiti narị afọ nke isii na nke iri nke ...
12.10.2020 / Remalaya / Eshia, India, Mmasị, Ezigbo mmasị / 1 комментарий Ndekọ Chọpụta ụlọ Ellora oge ochie na India
02.10.2020 / Remalaya / Belized, Ezigbo mmasị, North America / 1 комментарий Gaa na ebe nkiri nlegharị anya nke 10 dị na Belize
10 osimiri kacha mma na Spain
Spain si Top 10 Osimiri Isiokwu A na-ewu ewu ezumike ebe na Europe, Spain bụ ma ama n'ihi na ya ọgaranya na omenala na pụtara eke mma. Osimiri ya na-adọta ndị njem nleta na-achọ iji oge ezumike na ezumike n'oge ezumike ha. .sọ oké osimiri Spain, nke nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụsọ mmiri na ọdịdị ala, dị iche iche dịka ọ mara mma. Site n'ọrụ osimiri ...
30.09.2020 / Remalaya / Europe, Ezigbo mmasị, Spain, Osimiri, Njem Europe / Nkwupụta na 10 kacha mma osimiri na Spain ọ dịghị
6 nlegharị anya na France
6 nke ihe nlegharị anya dị na France Isiokwu Ndị Dị na Ya Ndị mmadụ bịarutere n'ụsọ mmiri mara mma nke France maka ọtụtụ ihe. Obodo ọkụ na akụkọ ifo Eiffel Tower dọtara ọtụtụ nde mmadụ na mma ha. Offọdụ akara ngosi nke France ka amaara nke ọma, mana n’akụkụ weirder. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe si tie ụzọ, gaa ụfọdụ nke creepy nlegharị anya ...
29.09.2020 / Remalaya / Europe, Ebe Eerie, Ezigbo mmasị, Njem Europe, France / 1 комментарий Na 6 nke nlegharị anya kachasị na France
Onye ọ bụla na-agha ụgha
Otu ha si arafu anyi, aga m acho ịkọ akụkọ m banyere iji nyocha nke ndi na - acho ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu banyere ihe nlebara anya nke Google. Lee otu o si mee. N'oge oyi a (2020), m gbagara Sri Lanka, nọrọ ebe ahụ na ụlọ nkwari akụ ezumike. A họọrọ ụlọ nkwari akụ ahụ nke ọma dabere na nyocha, foto, na atụmatụ nke ndị e chere na ha bụ ezigbo ndị ọbịa. Ozi a sitere na ...
12.09.2020 / Roman / Eshia, Без рубрики, Hotels, Eziokwu nyocha / Ihe 6 kwuru na Onye obula gha agha
-enye aka ọmụma
Enweghị ndekọ ọ bụla.
Agwaetiti 4 kacha mma na Sporades. Gris
Obodo 13 kachasị mma na Gris
11 agwaetiti kacha mma nke Dodecanese Gris
10 osimiri kacha mma na Gris
7 agwaetiti ndị mara mma nke Ionia Gris
Ihe 10 kacha elu ị ga-eme na Santorini Greece
Zinglọ Amazing nke Knossos na agwaetiti Crete na Gris
Ihe nlegharị anya 10 nke Crete Gris
Ihe nlegharị anya 10 kacha mma nke Thessaloniki Gris
10 ihe na-adọrọ mmasị na Peloponnese Gris
8 agwaetiti ndị mara mma dị nso na Atens Gris
Ihe nlegharị anya 10 kacha elu na Mykonos Gris
10 ebe nkiri kacha ewu ewu na Corfu Gris
Ihe nlegharị anya 10 kacha mma Rhodes Gris
6 nnukwu ebe obibi ndị mọnk na Meteora Gris
Ihe nlegharị anya 10 kacha mma na Milan .Tali
Ebe ezumike kacha elu 10 na Gris
10 na-akpali nlegharị anya na Zermatt Switzerland
Ihe nlegharị 10 kacha mma Bern Switzerland
10 ebe kacha mma ịga leta Switzerland
10 osimiri kacha mma na Indonesia
12 ugwu dị ịtụnanya na Indonesia
8 mpaghara kachasị mma nke Indonesia
Ebe 12 na Dnipro (Dnipropetrovsk) nke ikwesighi ịlafu. Ukarain
Ebe nkiri 12 na-adọrọ mmasị na Rotorua New Zealand
12 ebe nkiri Auckland New Zealand
Obodo 14 mara mma na New Zealand
Obodo 12 kachasị mma na New Zealand
8 ugwu dị ịtụnanya na New Zealand
Map ndị njem nleta
Mba mmekọrịta mba uwa
Ewebata gi map obodo, na-egosi njem nlegharị anya na ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị ma dị mkpa. Maapụ bụ mmekọrịta zuru oke, nwere foto na nkọwa nke ebe nkiri, nkwado smart search, SERP nhazi na zuru igodo... Ndị ọbịa debanyere aha na saịtị ahụ nwere ohere ịrụ ọrụ dị elu nke kaadị - na-agbakwunye akara nke gị, trekk, ụzọ gasị na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọzọkwa na i nwere map satịlaịtị, ndọtị elu na map enyemaka, na maapụ arụ ọrụ ihu igwe na nkwado ịkọ amụma.
Jiri ya na obi ụtọ!
Maapụ na-ebu ibo, biko chere ...
Ihe niile gbasara Thailand
General Map nke Thailand Ebe nkiri
Airgbọ elu ụgbọ mmiri Thailand
Ihe niile gbasara Sri Lanka
Mpaghara na ntụrụndụ nke Sri Lanka
Ọnọdụ ihu igwe dị na Sri Lanka
Bali. Map nke ebe nkiri na osimiri
Java. Map nke ebe nkiri na osimiri
Ihe niile gbasara Vietnam
General map nke ebe nkiri na osimiri
Maapụ ihu igwe Vietnam
General map nke ebe nkiri na osimiri Singapore
Weather map na Singapore
Ihe niile gbasara Singapore
General map nke ebe nkiri na osimiri India
Weather map India + amụma
Ihe niile gbasara India
Ndụmọdụ bara uru maka ndị njem. Ndụ hacks
Uru na ọghọm. Air, Sea, Railway, Auto ...
Na-eme atụmatụ njem
Etu esi echekwa na njem ikuku
Iwu akpa ikuku
Họrọ họtel. Atụmatụ
Kedu ihe ị ga-echezọ na njem
Anyị na-anakọta akpa n'ụzọ ziri ezi
Ibu ọrụ nke ụgbọ elu. Booụbiga mmanya ókè. Ikuku ikuku
Anyị na ụmụaka na-eme njem
Anyị na-enweta ego na njem
Ngwa ntinye foto
Ihe enyemaka mbu
Akwụkwọ dị ọhụrụ na Portal
Gaa na peeji
14.11.2020 / Nkwupụta na mmiri ọ dịghị
Osimiri nzuzo. Assọ Oké Osimiri Tugel na Bali
26.10.2020 / Nkwupụta na Osimiri Nzuzo. Osimiri Tugel dị na Bali ọ dịghị
Sanur Beach dị na Bali. Indonesia
25.10.2020 / Nkwupụta na Sanur Beach na Bali. Indonesia ọ dịghị
Pandawa osimiri na Bukit. Bali
25.10.2020 / Nkwupụta na Pandawa osimiri na Bukit. Bali ọ dịghị
Padang Padang osimiri dị na Bali. Indonesia
25.10.2020 / Nkwupụta na Padang Padang osimiri na Bali. Indonesia ọ dịghị
Osisi Mushroom. Agwaetiti Lenbongan. Bali
22.10.2020 / Nkwupụta na Osimiri Mushroom. Agwaetiti Lenbongan. Bali ọ dịghị
Osimiri Lembeng na Bali. Indonesia
22.10.2020 / Nkwupụta na Lembeng Beach na Bali. Indonesia ọ dịghị
Mgbasa ozi na saịtị
Agwaetiti Nusa Cheningan, Bali. Indonesia
Agwaetiti Menjangan na Bali. Indonesia
Agwaetiti Nusa Lembongan. Bali. Indonesia
Agwaetiti Nusa Penida. Bali. Indonesia
Udu mmiri, Snorkeling
Njem amị amị
Omume - njegharị
Gastronomic na njegharị mmanya
Njem osimiri dị omimi
Flightsgbọ elu teta
Ọgwụgwọ na Ahụike
Chọọ. Ikuku na Hotels
Ndebanye aha na Portal Journey-assist.com
Ọ́ bụghị oge anyị ịga?! ;)
Ndụmọdụ bara uru!
tinye Journey-Assist gaa n'ụlọ obibi gị!
Mgbe ọ tetara n’ụtụtụ otu ụbọchị ụra zuru ike, Gregor Samsa chọpụtara na ya aghọọla ahụhụ dị egwu n’elu akwa ya.
Ibepu maapụ, biko chere ...